Thursday November 09, 2017 - 12:33:38 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska Melleteriga Uganda ee loo yaqaan (UPDF) ayaa lagu sheegay in Waqti dhow Uganda ay bilaabi doonto in ay lasoo baxdo ciidamada xoogga ku jooga dalka Soomaaliya.
Ciidamo kumaan ah ayaa duullaan ku jooga Soomaaliya
Afhayeenka ciidanka Uganda Jeneraal Richard Karemire ayaa arbacadii shalay u sheegay wakaaladda wararka shiinaha in Uganda ay bilaabi doonto bisha soo socota ee December 2017, in cutubyadii ugu horraysay ay kala baxdo Soomaaliya kadib 10 sanadood oo ay wadanka ka dagaallamayeen.
Richard Karemire wuxuu sheegay in qorshahan uu qeyb ka yahay ka bixitaan tartiib tartiib ah oo saameyn doono dhammaan dowladaha ciidamadoodu ku suganyihiin Soomaaliya kuwaas oo ku howlgala magaca AMISOM.
Afhayeenka uhadlay melleteriga Uganda wuxuu carabaabay in ciidamada Uganda ee bilaabaya in ay kasoo baxaan Soomaaliya ay qeyb ka yihiin 6-kun oo Askar Ugandheys ah kuwaas oo lagu biiriyay Howlgalka AMISOM sanadii 2007, Francisco Madeira oo ah madaxa Ururka Midowga Afrika uqaabilsan Soomaaliya ayaa talaadadii lasoo dhaafay sheegay in ugu yaraan 1000 Askari ay dalka isaga bixi doonaan.
Uganada waxay sheegaysaa in ciidamadeedu ay tababareen boqolaal katirsan ciidanka Booliska iyo Melleteriga Dowladda Federaalka si ay awood ugu yeeshaan hanashada magaalooyinka ka hor inta aysan isaga bixin balse khubarada melleteriga ayaa rumeysan in maleeshiyaadka DF-ka aysan ubabac dhigi karin dagaalyahanada Al Shabaab.
Ciidamada shisheeye ee loo geliyay shaatiga AMISOM ayaa iska caabin adag kala kulmay xoogaga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, dagaalka Soomaaliya ayaa waji cusub galay kadib markii Al Shabaab ay sanaddii 2015 kusoo kordhisay xeelad cusub oo ah in Mujaahidiintu ay ku habsadaan saldhigyada cadowga kadibna ay cagta mariyaan askarta ku sugan saldhigyada waa weyn.
Weeraradii Taariikhda galay ee lagusoo gaba gabeeyay saldhigyada AMISOM waxay ka dhaceen deegaanada Leego, Janaale, Ceelcadde,Halgan iyo Kulbiyoow waxaa sidoo kale jiray weeraro jidgal ah oo lagu laayay ciidamo Itoobiyaan,Kenyaan,Yugaandheys iyo Burundeys ah.
Dhammaan ciidamada Jinsiyadaha kala duwan leh ee Soomaaliya kusoo duulay waxay kujiraan marxalad dhiigbax ah waxayna hadda dagaalka ugu daran ugalaan sidii ay sahay isugu gudbin lahaayeen magaalooyin dhaca Konfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo Al Shabaab ay Go'doomin adag saartay.